Ciise oo ku sugan Axdiga Hore, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Axdigii hore, Ilaah wuxuu shaaca ka qaaday in bini aadamku aad ugu baahan yihiin Bixiye. Ilaah wuxuu muujiyaa meesha dadku ay tahay inay raadiyaan badbaadiyayaal. Ilaah wuxuu ina siinayaa, sawirro badan oo muuqaalka kore ee badbaadiyahan ah si aan isaga u aqoonsan karno markii aan aragno. Waxaad Axdiga Hore uga fikiri kartaa inuu yahay sawir Ciise oo weyn. Laakiin maanta waxaan rabnaa inaan eegno qaar ka mid ah sawirradii Ciise ee Axdiga Hore si aan u helno sawir cad oo Badbaadiyeheenna ah.
Waxa ugu horreeya ee aan ka maqalno Ciise waa bilowga sheekada, Bilowgii 1. Ilaah wuu abuuray dunida iyo dadka. Waxaa lagu sasabi doonaa shar; Ka dib markaa waxaan aragnaa sida ay bini-aadamka oo dhan dib ugu laabtaan cawaaqibka. Abeesadu waa xuubka masiibada. Ilaah wuxuu abeesadii ku yidhi aayadda 3aad: "Oo colaad baan dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhib baad ku jiifsan doontaa. Abeesadu waa laga yaabaa inay guuleysato wareeggan oo ay ka adkaato Adam iyo Xaawa. Laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay in mid ka mid ah farcankooda uu aakhirka burburi doono abeesada. Kan ayaa imaan doona ...
1. Waxay baabi'in doontaa EVIL (Bilowgii 1:3,15).
Ninkanu wuxuu gacantiisa ku xanuunsan doonaa abeesada. Ciribta ayaa si gaar ah loo dhaawacay. Isagu wuxuu wada jiidi doonaa madaxa masaska, Wuxuu joojin doonaa nolosha dembiga. Wanaaggu wuu guuleysan doonaa. Waqtigan xaadirka ah taariikhda wax fikir ah kama lihin imaatinkaan. Ma Adam iyo Xaawa curadkiisii ​​mise waa qof imanaya milyan milyan ka dib? Laakiin maanta waxaan ognahay inuu mid yahay Ciise, kii yimid oo dhaawacmay oo iskutallaabta lagu qodbay, oo ciddiyaha laga muday. Iskutallaabta dusheeda ayuu kaga adkaaday ninka xun. Haatan qof walbaa wuxuu ka rajeynayaa inuu u yimaado Malaki labaad si uu u wiiqo Shaydaanka iyo awoodaha xun oo dhan. Waxaan u maleynayaa inaan si aad ah ugu dhiiran yahay mustaqbalkan maxaa yeelay wuxuu joojinayaa dhamaan waxyaalaha i halaagaya.
Ilaah wuxuu reer binu Israa'iil oo dhan u dhisayaa dhaqankan fikradeed in qof yimaado oo dadka ka badbaadiya sharka sharka ah sida gawraca oo kale. Taasi waxay ahayd dhammaan nidaamkii allabarigii iyo xafladii. Time iyo mar kale nebiyo na siiyey waxyaalihii lay tusay isaga ku saabsan. Mid muhiim ah oo ka mid ah Nebi Miikaah wuxuu leeyahay Badbaadiyuhu kama imaan doono meel gaar ah. Kama uusan imaan New York, LA ama Jerusalem ama Rome. Masiixa ...
2. Waxay ka imaan doonaan meel »gobolka ugu dambeeya» (Miikaah 5,1).
Oo adigu Beytlaxam Efraataahay oo ku yaryar magaalooyinka dalka Yahuudah waxaad iga heli doontaa anoo addoonkaaga ah reer binu Israa'iil.
Beytlaxam waa waxa aan jaceylka ugu yeedho "magaalo yar oo wasakh ah", yar iyo sabool, ay adag tahay in laga helo khariidadaha. Waxaan ka fekeraa magaalooyin yaryar sida Eagle Grove oo ku taal Iowa. Yar yar, magaalooyin aan qiimo lahayn. Taasi waxay ahayd Beytlaxam. Sidaa awgeed waa inuu yimaadaa. Haddaad rabto inaad hesho Badbaadiyaha, fiiri dadka halkaas ku dhashay. ("Marka hore ayaa ugu dambaysa"). Marka saddexaad, tan ...
3. Wuxuu ka dhalan doonaa VIRGIN (Ishacyaah 7,14).
"Haddaba Rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doonta: Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxay u bixin doontaa Cimmaanuu'eel."
Hagaag, taasi runtii waxay naga caawineysaa inaan helno isaga. Kaliya maahan inuu ka mid noqdo dadka tirada yar ee ku dhashay Beytlaxam, wuxuu ku dhalan doonaa gabadha uurka leh. Hadda aagga aan fiirinaynno ayaa cidhiidhi galay. Xaqiiqdii waad heli doontaa gabadh dhaheysa oo dhahda waxay leedahay dhalasho bikrad, laakiin waa been. Si kastaba ha noqotee, taasi way yaraan doontaa. Laakiin waxaan ognahay inuu Badbaadiyahaani ku dhashay gabar reer Beytlaxam ah oo sheegta inay bikrad tahay, ugu yaraan.
4. Waxaa ku dhawaaqay MADAXWEYNE (Malaakii 3,1).
Oo bal eeg, waxaan doonayaa inaan soo diro wargeeyahayga, Kan jidka ii diyaariya. Oo mar alla markii aad Rabbiga doondoontaan ayaa gurigiisu iman doonaa. Oo bal eeg, malaa'igtii axdigii aad jeclayd ayaa bal eeg, waa imanayaa. ayaa Sayidka ah Sebaa'ood.
Ilaah wuxuu leeyahay, Waxaan u imid inaan idin arko, Waxaa iiga horreeya nin wargeeys ah oo ii diyaarinaya jidkayga. Markaa haddii aad aragto qof kuu sharxaya inuu qof yahay Masiixa, markaa waa inaad fiirisaa Masiixa la tuhunsan yahay. Samee waxkasta oo loo baahan yahay si loo ogaado inuu ku dhashay Beytlaxam iyo hooyadiis oo ahayd bikrad markii uu dhashay. Ugu dambeyntiina, waxaan leenahay hanaan cilmiyeed si cilmiyaysan si kuwa shakiga leh ee naga mid ahi u hubiyaan bal inuu Masiixa la tuhunsan yahay kan dhabta ah iyo in kale. Taariikhdeena waxay ku socotaa la kulanka nebi la odhan jiray Yooxanaa Baabtiisaha kaasoo reer binu Israa'iil u diyaariyay Ciise Masiix oo u soo diray Ciise markuu muuqday.
5. Way noo xanuunsan doonaan (Ishacyaah 53,4: 6).
Runtii, isagu wuxuu ina qaaday cudurkayaga oo xanuunkeena qaatay. Isagaa loo dhaawacay xumaantayada aawadeed, oo xumaatooyinkeenna aya lagu ciqaabay. Ciqaabtiisu waxay dul saarnaan doontaa nabad galyo darteed waxaana ku bogsannay dhaawacyadiisa. »
Halkii Badbaadiye oo si fudud u burburin kara cadaawayaasheena oo dhan, wuxuu ugu guuleystaa guuleysiga xumaanta silica silica. Kuma guuleysto inuu dhaawaco dadka kale, wuxuu ku guuleystaa in isaga la dhaawaco. Way nagu adag tahay inaan ka fikirno. Laakiin hadaad xasuusatid, Bilowgii wuxuu saadaaliyay isla wixii. Wuxuu burburin lahaa madaxa masaska, laakiin abeesadu waxay ku dhejin doontaa ciribta. Haddii aan eegno horumarka taariikhda ee Axdiga Cusubi, waxaan ogaanay in Badbaadiye, Ciise, uu ku xanuunsaday oo u dhintay inuu bixiyo ciqaabta dembiyadaadi. Wuxuu u dhintay dhimashadii naftaadu soo kasbatay markaa ma aha inaad isaga bixiso. Dhiigiisa waxaa loo daadshay si lagaa cafiyo, oo jirkiisiina waa dillaacay si jirkaagu u helo nolol cusub.
6. Wax walbaa waxay noqon doonaan inaan u baahanahay (Ishacyaah 9,5: 6).
Muxuu Ciise noogu soo diray: «Ilmo baa inoo dhashay, wiil baa inala dhashay, oo dawladuna garbihiisu way dul saaran tahay; oo magiciisuna waa La-Taliyaha Miracle, Eebbe weyne, Aabaha daa'imka ah, Amiirka Nabadda; si uu boqornimadiisu u weynaan lahayd nabadna ugama dhammaan doono.
Ma u baahan tahay talo iyo xigmad wixii aad ku samayn lahayd xaalad nololeed oo gaar ah? Ilaah wuxuu kuu noqday la-taliyahaaga cajiibka ah. Ma qabtaa daciifnimo, qayb nolosha ka mid ah oo aad ku soo noqnoqonayso marar badan iyo halka aad ugu baahan tahay xoog? Ciise wuxuu u yimid inuu noqdo Ilaaha xoogga badan ee dhinacaaga diyaar u ah inuu u oggolaado in muruqyadiisa aan dhammaad lahayn ay kuu noqdaan. Ma u baahan tahay aabbe jacayl ah oo had iyo jeer kuu jiifa weligiisna kaa niyad jabi doono, sida dhammaan aabayaasha noolaha ah aan laga maarmi karin? Miyaad gaajaysan tahay aqbalaadda iyo jacaylka? Ciise wuxuu u yimid inuu idin siiyo adiga oo ah Aabbaha keliya ee weligiis nool oo aad loogu kalsoonaan karo. Ma cabsi, cabsi iyo xasillooni la'aan baa? Eebbe wuxuu ku yimid Ciise inuu kuu keeno nabad aan lagaran karin maxaa yeelay Ciise laftiisu waa amiirka nabadaas. Wax baan kuu sheegayaa: Haddii aanan igu dhiirrigelin raadinta Badbaadiyeyaashan, runti hadda waan noqon lahaa. Waxaan u baahanahay waxa uu soo bandhigo. Wuxuu ku siiyaa nolosha wanaagsan oo hodan ku ah xukunkiisa. Tani waa midda uu Ciise ku dhawaaqay markuu yimid: “Boqortooyada Ilaah waa timid!” Nolol cusub oo nolosha ah, oo ah nolosha uu isagu boqor u xukumo. Qaabkan cusub ee nolosha ayaa hadda helaya dhammaan dadka raacsan Ciise.
7. Samee boqortooyo MARNA KALIYA (Daanyeel 7,13: 14).
"Habeenkii waxaan arkay wejiga, oo bal eeg, mid buu yimid isagoo daruur cirka u eg oo kale oo wiil ah, oo wuxuu u yimid kii duugga ahaa, hortiina waa loo keenay. Waxay siisay xoog, sharaf iyo boqortooyo inuu u adeego dadyowga oo dhan iyo afaf kala duwan. Xooggiisu weligiisuu waaraa weligiisna ma dhumi doono, boqortooyadiisuna weligeed ma dhammaan doonto.
Waxaa qoray John Stonecypher